सर्भिस-सामग्री - Boson
संयंत्र उच्च गुणस्तरीय छाला कार्ड होल्डर को उत्पादन मा केंद्रित ,छाला वालेटमा, आरएफआईडी वालेटमा, एल्यूमीनियम कार्ड होल्डर.
कि पहिलो छाप गणना बनाउन रंग परिभाषित बारेमा सबै छ, शैली, प्याकेज. हामी यो सबै तपाईं मदत गर्न सक्छ.
जब यो वालेटमा आउँछ, यसलाई आफ्नो वस्तु अडान वा गिरावट बनाउँछ कि डिजाइन गुणस्तर छ. तपाईं अभ्यास आफ्नो विचार परिवर्तन मा तपाईंलाई सहयोग गर्न एक रचनात्मक डिजाइन टोली आवश्यक…
Customization: सबै उत्पादनहरू अनुकूलित गर्न सकिन्छ. तपाइँ उत्पादन मा तपाइँको ट्रेड मार्क थप्न सक्नुहुन्छ, प्याकेज, धन्यवाद कार्ड र ब्रोशर…